Zyro: Amboary mora ny tranokalanao na fivarotana an-tserasera miaraka amin'ity sehatra mora vidy ity | Martech Zone
Zyro: Amboary mora ny tranokalanao na fivarotana an-tserasera miaraka amin'ity sehatra mora vidy ity
Alakamisy 11, 2021 Alakamisy 11, 2021 Douglas Karr
Ny fisian'ny sehatra ara-barotra mora vidy dia mitohy mampiaiky volana, ary ny rafitra fitantanana votoaty (CMS) tsy misy hafa. Niasa tao amin'ny sehatra CMS manan-tompo, open-source ary karama aho nandritra ny taona maro… ny sasany tsy mampino ary ny sasany sarotra. Mandra-pahafantarako ny tanjon'ny mpanjifa, ny loharanon-karena ary ny fizotrany, dia tsy manome soso-kevitra momba ny sehatra hampiasaina aho.
Raha orinasa kely ianao izay tsy mahavidy vola an'aliny amin'ny fisian'ny tranonkala, dia mety hampiasa sehatra tsotra tsy mila kaody ianao ary manana môdely mifantina tsara ho anao manokana.
Rehefa nanangana a toerana spa herintaona lasa izay, nampiasa sehatra iray fantatro aho fa hanome ny fitaovana fanohanana sy fitantanana izay ilain'ny mpanjifako. Tsy nisy fomba hanorenana tranokala mila fikojakojana tsy tapaka, fanavaozam-baovao, ary fanatsarana hatrany… satria tsy afaka nandoa vola tamin'izany ezaka izany ny tompony.
Zyro: Manangana tranokala, fivarotana an-tserasera, na portofolio
Vahaolana iray tena takatry ny saina dia zyro. Zyro dia manana vidin'entana rehetra ary antoka tsy misy atahorana, 30 andro hiverenan'ny vola. Mahazo fanohanana mivantana amin'ny chat 24/7 aza ianao amin'ny drafitra rehetra!
fampiantranoana – Tsy ilaina ny maka mpanome fampiantranoana, ny sehatra Zyro dia tafiditra ao avokoa. Azonao atao mihitsy aza ny mahazo ny sehatra misy anao amin'ny alàlan'ny serivisiny maimaimpoana miaraka amin'ny fonosana sasany.
Templates - Ny maodely Zyro rehetra dia namboarina tsara ary mamaly ny finday. Atombohy amin'ny môdely banga, na mifidiana avy amin'ny môdely fivarotana, môdely tolotra fandraharahana, môdely sary, môdelin'ny trano fisakafoanana, môdely portfolio, môdely resume, môdely hetsika, môdely pejy fipetrahana na môdely bilaogy.
Mpanonta Drag-and-Drop - Tsy misy kaody ilaina, manana fifehezana famoronana feno ianao miaraka amin'ny maodely vita amin'ny mpamorona izay azo amboarina amin'ny marika sy ny hafatrao.
Search Engine Optimization - Zyro's Ny sehatra fitantanana votoaty dia manana ny endri-javatra rehetra ilaina amin'ny fanatsarana ny tranokalanao na fitehirizana motera fikarohana.
Mpanoratra AI - Tsy mpanoratra mahay? Tsy mahita fotoana hanoratana tsotra izao? Avelao ny AI Writer hamorona lahatsoratra ho an'ny tranokalanao mandritra ny fananganana azy.
Ecommerce - Fonosana e-varotra feno, ao anatin'izany ny fanodinana fandoavam-bola, fampidirana fandefasana entana, mpitantana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM), mailaka mandeha ho azy, ary tatitra. Ny fivarotanao dia azo ampidirina mora amin'ny Amazon, Facebook ary Instagram.
Security - Ny tranokala dia azo antoka tanteraka amin'ny alàlan'ny fanamarinana SSL anao sy ny encryption HTTPS, ary voaaro ihany koa ny fifanakalozana e-varotra.
Tatitra lalina – Fantaro hoe avy aiza ny fifamoivoizana ary amboary ny fiovam-ponao amin'ny fitaovana toy ny Google Analytics, Kliken, ary MoneyData.
Zyro dia manana drafitra mora vidy tsy misy vidiny miafina.
Zyro dia manana tolotra Black Friday izay manomboka ny 15 Novambra ka hatramin'ny 7 Desambra… ampiasao ny code ZYROBF ary mitahiry hatramin'ny 86%!
Andramo maimaim-poana i Zyro!
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho zyro ary ampiasaiko ny rohy mpampifandray ahy ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fivarotana amazonCMSrafitra fitantanana atinymanao-it-tenasehatradrag-and-drop editorecommercefanatsarana ny ecommercesehatra ecommercefcommercevarotra instagramlisitralisitra fitantananafivarotana an-tseraserampanamboatra fivarotana an-tseraserasehatra fivarotana an-tseraserampamorona tranonkala an-tseraseraOptimizationtranokala portfolioSEOserivisy fandefasanavarotra sosialytemplate templatezyro
Circleboom Publish: Famolavolana, drafitra, fandaharam-potoana ary automatique ny marketing media sosialy anao
SocialBee: Sehatry ny media sosialy madinika miaraka amin'ny serivisy Concierge